गायिका अन्जु पन्त आजभोली समाज सेवामा निकै सक्रिय ,के के गर्दैछिन आजभोली अन्जु पन्त? – PanchKhal Online
Home/समाचार/गायिका अन्जु पन्त आजभोली समाज सेवामा निकै सक्रिय ,के के गर्दैछिन आजभोली अन्जु पन्त?
गायिका अन्जु पन्त आजभोली समाज सेवामा निकै सक्रिय ,के के गर्दैछिन आजभोली अन्जु पन्त?
समाज : नेपाली सुगम , गजल तथा पाश्र्व गायनमा निकै रुचाइएकी चर्चित गायिका अन्जु पन्तले आफनो परिचय सेलिब्रेटीको रुपमा मात्र होईन एक समाजसेवीको रुपमा पनि बनाउँदै आएकीछिन् ।
गीत संगितको क्षेत्रमा नाम र दाम दुबै कमाएकी यी गायिका पछिल्लो समय अन्जु पन्त फाउन्डेशनमाफर्त दिनदुखीहरुलाई सहयोग गर्दै आएकीछिन् । गरिब तथा असाहय बालबालिकाहरुका लागि समेत सहयोगका लागि अगाडी आईसकेकी छिन् ।
उनले आर्थिक स्थिती कमजोर भएकाहरुलाई राहत तथा गरिब बालवालिकालाई पाठ्यसामग्री , जाडो याममा लगाउने लत्ता कपडा लगायतका सामानहरु बितरण गर्दै आईरहेकीछिन् ।
यसबीच उनी अब तीनै असहाय बालबालिकाहरुका लागि घर बनाउँने अभियानमा जुटेकीछिन् । अन्जुले पर्साको सुगौलीमा करिव ३५ घर धुरीका लागि बस्ती निर्माण गर्ने भएकी हुन् । दुई वर्ष अगाडी बाढीले घर बगाए पछि उनीहरु टहरोमा बस्दै आएका छन् ।
उनीहरुको अवस्था दयनीय छ, खाने पकाउने भाडाकुडा देखि ओड्ने ओछ्याउने कपडासम्म छैन । यस्तो स्थानीयकै आग्रहमा अन्जु बस्ती बसाल्ने अभियान थाल्ने भएकी हुन् । बस्ती निर्माणको निर्णयसंगै उनले अहिले नाप नक्साको काम गरिरहेकीछिन् ।
हाल कागजी प्रक्रिया चलिरहेको उनले बताएकीछिन् । अन्जुले अमेरिकामा भएको कार्यक्रम मार्फत केही रकम जम्मा गरेकीछिन् । तर त्यो पर्याप्त छैन त्यसैले सहयोगी मन समक्ष उनले सहयोगको हात अघि बढाउन आग्रह गरेकी छन् ।
अन्जु बस्ती निर्माणका लागि मात्र होईन स्थानीयलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रक्रियामा समेत रहेको बताएकीछिन् । केही समय यता अन्जु पन्त समाज सेवामा लागिरहेकीछिन् । तर उनलाई समाज सेवाको नाममा क्रिश्चियन धर्मको प्रचारप्रसार गर्ने गरेको आरोपहरु लाग्दै आएका छन् ।
चर्चित चपली गर्ल विनिता बरालले गरिन् अमेरिका निवासी तिलक पौडेलसँग बिहे (भिडियो रिर्पोट)